Imaamkii masjidka Al-furqan oo kuyaala magaalada New York oo toogasho lagu dilay salaadii Subax kadib - Horn Future
Imaamkii masjidka Al-furqan oo kuyaala magaalada New York oo toogasho lagu dilay salaadii Subax kadib
New York-Sida warbaahinta ay faafisay warar laga soo xigtay dad markhaatiyaal ah ayaa sheegay in imaam iyo qof kale oo la socday lagu dilay Sabtidii magaalada New York milay ay usoo socdeen aqalkiisa kadib markii ay tukadeen salaaddii Subax taasoo ka dhacday masajid ku yaala degmada Queens.
Tiffany Phillips oo ah afhayeen u hadlay booliiska New York ayaa sheegay in toogasho lagu dilay Akonjee oo ahaa xaasle 3 xaruur leh, da’diisuna ahayd 55 jir iyo nin kale oo la socday oo da’diisa lagu sheegay 65 jir meel u dhow beerta( Allena Park,) ee degmada Queens.
Waxa afhayeenkani intaa uu ku daray in booliisku aynan weli go’aamin cida la tuhunsan yahay ama sababaha dembiga, “laakiinse aynan ka saareynin meesha suurogal kasta.”
Afhayeen ku hadlay magaca dhakhtarka (Jamaica Hospital Medical Center) ayaa sheegay in labada nin la keenay dhakhtarka kadibna ay ku dhinteen milay la isku dayayay in naftooda la badbaadiyo.
Imaam Calaa-udiin Akonjee muqaalka bidix,midig qofkii la socday
Masjidka Al-furqaan bidix iyo dad ka cadheeysan dilkan loo gaystay imaamka iyo qofkii la socday
Booliiska oo milay dambe la hadlay warbaahinta ayaa sheegay Imam Calaa-uddin Akonjee iyo qofkii la socday ay u dhinteen rasaas ka haleeshay madaxooda oo lagu toogtay meel aad dhow, milay labadani ay xidhnaayeen hu ama dhar xambaarsan astaamaha diinta.
Televishanka, “NBC” ee New York ayaa sheegay in toogashadu ay ka dhacday fiid-cowlkii milaygii saacada bariga America ay ahayd 2dii galabtii taasoo kaliya ka dhacday meel u jirta 2 dhisme masjidka Al-Furqaan oo labadan nin ay ku tukadeen.
Muuqaal video ah oo lagu faafiyay goobta YouTube ka ayaa muujiyay tobonaan qof oo isku gu soo ururiyay meel u dhow goobta toogashadani ka dhacday iyada qof kamid ah dadkani uu ku qaylinayay ” Waxani waa danbi nacayb kusalaysan”.
Si kastaba ha ahaatee tan iyo wixii ka dambeeyay weerarada Islaam nacaybka xambaarsan ee uu caadeeystay ninka musharaxa u ah xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa waxa si la argagaxo u kordhay weerarada lagu hayo dadka Muslimiinta ah,masaajiidooda ay ku cibaadeeystaan iyo korodhka naceyb aanan hore loo arag oo loo qaadey Muslimiinta Maraykanka.
Donald Trump ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashooyinkii hor-dhaca ahaa ku baaqay marar badan in ilaalo kormeer ah lagu sameeyo xaafadaha ay deggen yihiin dadka Muslimiinta ah oo uu ku tilmaamay in ay kasoo baxaan waxa uu ku sheegay argagixisadu.
Odhaahda argagixisada loogu yeedho ee dadka Muslimiinta ah ee dunida ku nool lagu shaambadeeyo ayaa waxa ay noqotay badeecad raqiis ah oo ay isticmaalaan kuwo uu ku fogaaday nacaybka iyo xumaanta ay qabaan Islaamka iyo Muslimiintu iyo kaligood-taliyaasha dalalka Muslimiinat xooga ku haysta oo iyaku u isticmaala odhaahdan si xukunkooda salidka ah uu usii waaro.
« India’s Cow Vigilantes	» Sanad guurihii 3aad ee kasoo wareegay xasuuqii ba’naa ee dilaaga Sisi ka gaystay Masar kadib afgambigii uu ku kacay+video